Moments leh saaxiibo 18
Xuquuqda, 1909, by HW PERCIVAL.
Haddii caqliyada cilmiga leh ay awood u leeyihiin inay arkaan arimahan, maxaa sabab u ah in aysan jirin ilaalo dhexdhexaadin ah oo dhexdhexaad ah oo awoodi kara in uu la kulmo baaritaanka tirakoobka caanaha ee caanka ah?
Su'aashani waxaa loola jeedaa tijaabo ay bulshada cilmi baarista cilmi nafsiga ku dhigtay maadooyinkeeda. Waxaa la sheegaa inay ku bixisay lacag dhan shan kun oo doolar qof kasta oo dhexdhexaadiye ah oo sheegi kara tirada saxda ah ee oranjiga maadaama lagu tuuray boorso dambiil ama shay la mid ah oo la dhigo si loogu helo.
Illaa iyo hada qofna ma awoodo inuu qiyaaso ama u sheego tirada saxda ah ee oranjiga miiska ama dambiisha in kasta oo inbadan ay isku dayeen.
Haddii jawaabta saxda ah la bixiyo, waa in lagu siiyaa mid ka mid ah sirdoonka dhex-dhexaadka ama sirdoonka xukuma aaladda. Haddii sirdoonka dhex dhexaadiyuhu awoodo inuu xalliyo dhibaatada looma baahna in la xakameeyo; laakiin dhexdhexaadiyaha ama xakameeyuhu ma xallin dhibaatada. Dhibaatadu kuma koobna kartida wax lagu arko, laakiin waa in la xisaabiyo tirooyinka. Dhexdhexaad iyo xakameynba waxaa laga yaabaa inay awood u yeeshaan inay wax ku arkaan, sida cunugga oo muraayad ku arki karaya dadka ka sii gudbaya dhinaca ka soo horjeeda wadada. Laakiin haddii ilmuhu aanu baran hawlgalka maskaxeed ee tirinta, ma awoodi doono inuu sheego lambarka hortiisa dariishadda wakhti kasta ha ahaatee. Waxay u baahan tahay maskax lagu tababbaray tirinta si ay awood ugu yeelato inay si dhakhso leh isugu dari karto tirooyinka tirada badan, hadana wali tababarku waa inuu noqdaa maskaxda kaasoo awood u leh inuu sheego inta qadaadiic ah ee koox ama imisa qof oo dad fara badan.
Sida caadiga ah, fikirka dhexdhexaadka ma ahan amar sare, oo kontaroolada kuwa dhexdhexaadka ah ayaa ka hooseeya celceliska bini aadamka caadiga ah. Qalabka wax lagu kala iibsado ee loo yaqaan 'clairvoyant' ama xakameyn dhexdhexaad ah ayaa laga yaabaa, sida cunugga maktabadda ku yaal, maktabad farshaxan ama jardiinooyin ubaxa ah, inay ku arkaan waxyaabaha ku jira. Sida cunugga gacan ku haynta dhex-dhexaadka ama sharrax ka qaadashada ayaa laga yaabaa inay ka hadlaan buugaagta qalaad ee kiisaska qaaliga ah, ama farshaxannada cajiibka ah, iyo ubaxyada quruxda badan, laakiin waxay ku noqon doontaa khasaare ba'an oo lagula tacaalo mawduuca buugaagta, inay dhaleeceeyaan oo ay ku sharxaan khasnadaha farshaxanka ama in laga hadlo ubaxyada marka loo eego sharraxaadda. Awoodda wax lagu arko ee ma aha kuma koobna awoodda lagu ogaado waxa la arko.
Jawaabta tooska ah ee suaasha sida sababta qof dhexdhexaadiye ah uusan awood ugu yeelan u qalmitaanka imtixaanka ayaa ah: maxaa yeelay qof bini-aadam ah oo maskaxdiisa tabobaray ma awoodo inuu xisaabiyo marka loo fiirsho cutubyada sameysanaya tiro aad u badan. Tani waa sababta dhexdhexaadka uusan u awoodin inuu si cad u sheego tirada oranjiga ee ku jirta bac weyn ama dambiil. “Maareynta ruuxa” ma oga wax intaa ka badan, halka qalliinnada maskaxda ay ka welwelsan yihiin, marka loo eego maanka kontaroolada ay ogyihiin waqti kasta oo ay tahay mabda'a wargelinta ee aadanaha.
Haddii mid ka mid ah dadkii goob jooga ahaa awoodo inuu sameeyo hawlgal maskaxeed ee xisaabinta tirada oo maskaxda ku haynaya lambarka maankiisa, ha ahaato koontaroolka ama dhexdhexaadka ayaa jawaabi kara. Laakiin iyada oo maaddaama midkoodna maanka maskaxda ku jira uusan tan samayn karin, xakamaynta ayaa sidoo kale aan awoodin inay qabato. Ma jiro xakamayn meel dhexaad ah oo awood u leh inay qabato qalliin maskaxeed oo aan waligeed binu-aadamka fulin.
Muxuu sharaxaad ka bixin karaa Theosophy oo ku saabsan dhulgariirrada ba'an ee si joogta ah u dhacaya, oo laga yaabo inay burburiyaan kumanaan qof?
Sida laga soo xigtay Theosophy wax kasta oo adduunka ku jira way isku xidhan yihiin. Ragga, dhirta, xayawaanka, biyaha, hawada, dhulka iyo dhammaan waxyaabaha ay ka shaqeeyaan oo midba midka kale uga falcelinayo. Jirka guud ahaan waxa dhaqaajiya jirka wanaagsan, unugyada aan caqli badnayn waxaa dhaqaajiya sirdoonka, wax walbana waxay kudhacaan meelaha dabiiciga ah. Musiibo kasta oo fal noqota waa inay noqotaa natiijada sababta. Dhamaan ifafaaleyaashii ka soo qaybgalay natiijooyin wanaagsan ama masiibo waa natiijada iyo natiijooyinka fikirka nin.
Fikradaha dadku waxay hareereeyaan ama kor ugu baxaan oo ay ku samaysmaan kooxo ama daruur sidii ay ahayd kor iyo agagaar dadkaas, iyo daruuraha fikirka ayaa ah nooca dadka samaystaa. Fikirka qof kastaa wuxuu ku darayaa isku darka guud ee fikirka kaas oo laga joojiyay dadka. Marka waddan walbaa wuu dulsaaraa fikirkiisa iyo dabeecada dadka ku nool dhulka. Sida jawiga dhulku leeyahay xoog ku dhex ciyaara kaas oo saameeya dhulka, sidaas oo kale jawiga maskaxda ee daruuraha fikirka ayaa waliba saameeya dhulka. Sida waxyaabaha iskahorimaadka ah ee jawiga, natiijada oo u hel haadkooda duufaano, sidaa darteed fikradaha is khilaafsan ee jawiga maskaxda waa inay sidoo kale ka helaan muuqaalkooda ifafaale jireed iyo ifafaalaha noocaas oo kale ah ee fikirka fikirka.
Jawiga dhulka iyo jawiga maskaxeed ee dadku waxay ku falceliyaan ciidamada dhulka. Waxaa jira wareejin xoogagga ka socda gudaha iyo dibedda dhulka; ciidamadan iyo ficilkoodaba qayb kasta oo ka mid ah dhulka waxay waafaqsan yihiin shuruucda guud ee gacanta ku haya guud ahaan dhulka. Sida jinsiyadaha raggu u muuqdaan, u kobcaan uguna xumaadaan qaybaha kala duwan ee dhulka, iyo sida dhulka, sidoo kale, waa in la beddelaa qaabkiisa inta lagu jiro da'da, isbeddelada lagama maarmaanka u ah horumarka guud waa in la soo saaraa, taasoo keentay isbedel u janjeedha xagga xudunta dhulka iyo isbedelka dhulka.
Dhulgariir waxaa sababay isku day, dadaalka dhulka inuu isku waafajiyo awoodaha saameynta ku leh iyo isu sinnaanta iyo isu dheelitirka isbadalkiisa. Marka tiro badan oo dad ah ay ku halligmaan dhulgariir macnaheedu wuxuu yahay in dunidu aysan kaliya is-waafajin karin marka loo eego qorshaha juqraafi ahaan, laakiin in badan oo dadka ay waxyeelladu ka soo gaarto dhimashadu waxay sidan ugula kulmeen iyadoo ay ugu wacan tahay sababaadka karmic ee ay leeyihiin. ka gaabsaday.